Madaxweynihii hore ee Puntland Gen.Cade Muuse Xirsi oo Aas Qaran loogu sameeyey Bosaso[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Madaxweynihii hore ee Puntland Gen.Cade Muuse Xirsi oo Aas Qaran loogu sameeyey Bosaso[Sawirro]
BOOSAASO – Waxaa maanta oo salaasa ah aas qaran loogu sameeyey garoonka diyaaradaha ee Boosaaso Rabbi ha u naxariistee Jen. Maxamuud Muuse Xirsi Boqor(Jen. Cadde).
Marxuumka meydkiisii ayaa laga soo qaaday magaalada Dubai ee dalka Isutaga Imaaraatka carabta halkaasoo uu ku geeriyooday,waxaana la socday meydkiisa ,Xaaskiisa Cibaado Axmed Xirsi Boqor iyo Carruurtiisa oo ay kamid ahaayeen Maxamed Cadde Muuse,Ubax Cadde Muuse iyo Cabdullaahi Cadde Muuse.
Garoonka diyaaradaha ayaa marxuumka meydkiisa aas qaran loogu sameeyey ,waxaana ka qeybgalay Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Cali Gaas, ku-xigeenkiisa Cabdixakiim Xaaji Camey Afhayeenka Baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi, Xildhibaano Saraakiisha ciidamada, waxaana ciidamadu ay halkaas ku bixiyeen salaan sharaf.
Sidoo kale waxaa ka qeybgalay in badan oo kamid ah Issimada Puntland oo ay kamid yihiin Islaan Bashiir Islaan Cabdulle, Islaan Ciise Islaan Maxamed, Ugaas Xasan Ugaas Yaasiin, Suldaan Cabdiqani Cali Baale, Garaad Cabdisalaam iyo Boqor Burhaan Boqor Muuse oo marti loo ahaa iyo qaar kale oo kamid ahaa isimada Puntland.
Dhanka magaalada Muqdisho waxaa ka ymid diyaarad ay la socdeen rayslawasaaraha xilku ka dhamadey Cumar Cabdirashiid Sharmaarke, raysalwasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi, ku xigeenka labaad ee Aqalka Sare Mowliid Guhaad iyo Xildhibaano ka tirsan labada aqal ee Soomaaliya.
Marxuum Gen. Cadde Muuse ayaa lagu aasey banaanka Koonfureed ee garoonka diyaaradaha Bosaso waxaana salaadii ku tekadey dad ku dhaw kun qof.
8 Febaraayo 2017 ayuu ku geeriyoodey isbitaal ku yaala Dubai halkaas oo uu ku xanunsanaa muddo 10 maalmood ah.